बर्ड फ्लु भनेको के हो? यो फैलिएको बेलामा कुखुराको मासु खान हुन्छ कि हुँदैन? (भिडियो ) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बर्ड फ्लु भनेको के हो? यो फैलिएको बेलामा कुखुराको मासु खान हुन्छ कि हुँदैन? (भिडियो )
बर्ड फ्लु भनेको के हो? यो फैलिएको बेलामा कुखुराको मासु खान हुन्छ कि हुँदैन? (भिडियो )
admin March 27, 2019 March 27, 2019 भिडियो	0
बर्ड फ्लू एभियन इन्फ्लूएञ्जा भाइरसको छोटकरी रुप हो। एसियाका विभिन्न देशमा भेटिएको यो भाइरसको पूरा नाम हाइली प्याथोजोनिक एभियन इन्फ्लूएञ्जा अर्थात् एचफाइभ एनवान हो। बर्ड फ्लू कुखुरा र पक्षीहरूको अति सङ्क्रामक रोग हो। यो जतिबेला जहाँ पनि फैलन सक्छ।
बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की र जङ्गली चराचुरुङ्गीमा लाग्ने सरुवा रोग हो, र कहिलेकाहीँ सुँगुरमा पनि भेटिएको छ। यो रोग मानिसमा पनि सर्न सक्छ। यो रोग सर्वप्रथम सन् १९७८ मा पक्षीमा र सन् १९९७ मा मानिसमा देखिएको हो। बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण भेटिएको विश्वको पछिल्लो ६६ औं मुलुक हो नेपाल। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश र इण्डोनेशियामा यसले विकराल अवस्था निम्त्याएको छ। खोकीको सङ्क्रमण जस्तै हो बर्ड फ्लू, जसले कुखुरा तथा पक्षीहरूमा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ। बर्ड फ्लूको भाइरस कुखुराको मासु, प्वाँख, सिंगान, र्याल, सूली, दाना, अण्डा, अण्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेको बोरा आदिको सम्पर्कबाट सर्दछ।
वापानीको माध्यमबाट यो भाइरस अत्यन्त द्रूत गतिमा फैलन र धेरैको ज्यान लिनसक्ने भएकाले बर्ड फ्लूलाई प्राणघातक रोग पनि भनिन्छ। कुखुराको मासु ७० डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा राम्ररी पकाएर खाएमा रोग लाग्दैन।
भेटिए अहिले सम्मकै उत्कृष्ट जादुमय स्वरका धनी बालक, जो यसरी मन मुटु छुने गरी गाँउछन् – भिडियोमै हेर्नुहाेस्
जीवनभर नभुल्ने पिडा दिएर कान्छीसँग बसे श्रीमान्, २ छोरा हुर्काउन के सम्म गरिनन्? रुँदा-रुँदै अन्तर्वार्ता नै सकियो(भिडियो हेर्नुहोस)
बालकले कुकुरलाई मास्क लगाइदिएको भिडियो भाइरल (भिडियो सहित)